News - Ọdịnihu ọdịnihu nke igwe eji arụ ọrụ akpaka
Ọdịnihu ọdịnihu nke ọgụgụ isi igwe akpaka
A ga-edozi ụfọdụ nsogbu ndị dị na igwe na-arụ ọrụ mkpo igwe nke mba m ozugbo enwere ike. Iji nweta ọkwa dị elu nke ụwa ozugbo enwere ike, a ka nwere ọtụtụ teknụzụ nke igwe na-etinye mba m ga-emerịrị. Ọ bụrụ na igwe nkwakọ ngwaahịa nke mba m chọrọ ịkwalite arụmọrụ arụmọrụ, ọ kwesịrị ijikọ igwe nkwakọ ngwaahịa na igwe nrụpụta, na-ebelata oge nnyefe, ma belata ọnụ ahịa usoro mgbasa. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-emeziwanye ọkwa nke igwe na-ebu ngwa ngwa iji belata ọdịda.
Nkwakọ ngwaahịa Smart enwetawo nlebara anya na mmepe zuru oke na mba ndị mepere emepe, mana na China, nyocha na mmepe nke nkwakọ ngwaahịa mara mma yana ntinye ya n'ọtụtụ ebe ka dị na nwata. Mana o gosikwara na site n'echiche ọzọ, agbanyeghị na ngwa nkwakọ ngwaahịa smart nke mba m ka nọ n'azụ mba ndị mepere emepe, ahịa ngwakọ smart smart nke mba m nwere oke oke uru na-eche ka enweta.
Site na mmepe nke teknụzụ, ọgụgụ isi aghọwo oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ nke mmepe ahịa. Dị ka ụlọ ọrụ ọwụwa anyanwụ, ọ bụrụhaala na ọ metụtara ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi, ha enweta nnukwu nkwakọ ngwaahịa. N'otu oge mgbe ọnụọgụ nke ihe nchekwa nchekwa nri na-adị elu na igwe na-etinye aka na akpaka, nkwakọ ngwaahịa smart aghọwokwa isi ihe mmepe nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. N'ihe ụfọdụ metụtara, mmepe nke nkwakọ ngwaahịa smart na China ka dị na nwata, yana mkpa ndị na-akwọ ahịa ahịa siri ike iji nyere aka mmepe ya. Nkwakọ ngwaahịa Smart pụtara na ndị mmadụ agbakwunyela ihe mgbakwunye ọhụụ ọhụrụ na nkwakọ ngwaahịa ahụ site na iche echiche ọhụrụ, nke mere na ọ bụghị naanị ọrụ bụ isi nke nkwakọ ngwaahịa izugbe, kamakwa ụfọdụ ihe pụrụ iche.
N'ozuzu, mba ndị ọzọ na-eji akara ndekọ akụkọ ihe mere eme na-ekpo ọkụ (TTI), akara ngosi ihe ngosi nke microbial (MGI) na nri a kwakọtara, akara ngosi fotochromic, akara ujo anụ ahụ, nkwụsị, akara microbial, na akara aha redio (RFID), akara DNA (deoxyribonucleic acid), wdg. mgbe gbanwetụrụ ikuku nkwakọ ngwaahịa, antibacterial nkwakọ, vinyl adsorption nkwakọ, oxygen-adọrọ nkwakọ, onwe-kpo oku / onwe-jụrụ nkwakọ, isi adsorption nkwakọ, aromatic tọhapụ nkwakọ, mmiri absorption Nkwakọ wdg a kọwara dị ka ọtọ nkwakọ.
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ nchekwa nkwakọ ngwaahịa na mba m ka dị oke njọ, yana ihe nchekwa nchekwa nri na obere na-eme kwa afọ. Yabụ, ahịa nkwakọ ngwaahịa smart ga-aga n'ihu na-emepe emepe ma ga-agbakwunye teknụzụ nkwakọ ngwaahịa mara mma iji hụ na nchekwa nri. Ka ọ dị ugbu a, teknụzụ obodo m nwere ọgụgụ isi ka nọ n'ọkwa dị obere, ma a ka nwere nnukwu ọdịiche na teknụzụ dị elu nke mba ọzọ. Mmezu nke teknụzụ obodo m nwere ọgụgụ isi nwere ọtụtụ ụzọ m ga-aga.